ပြည်သစ်ဟန် ● ခြင်အက်ဆေး (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
ကြားလော့။ ခြင်ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ ဟိုရက်က အတော်လေး ငြိမ်နေခဲ့သည်။ ရေမြောင်းတွေထဲ၊ စပါးခင်းတွေထဲမှာ ရေအ သစ်များဝင်ရောက်လာသဖြင့် ခြင်များအတော်လေး ကျဲပါးသွားသည်။ ကျွန်တော့်၏ ခြင်ဆေးခုံ ဒေါက်ကလေးပင် အထီးကျန် နေရသည်။ ခြင်ဆေးခွေ ပြာတွေလည်း လှဲကျင်းရသက်သာခဲ့သည်။ ခြင်ဆေးအနံ့လည်း မခံရတော့ပေ။ ခြင်နိုင်ငံတော်ကြီး ခဏတာ အေးချမ်းသွားပြီလားဟူ၍ ဝမ်းသာနေမိသည်။ သို့သော်လည်း…. …. …..။